आर्डूनो एमकेआर वान १1300०० र अर्डिनो एमकेआर जीएसएम १1400००, अर्डिनो परियोजनाबाट आईओटीका लागि नयाँ बोर्डहरू | नि: शुल्क हार्डवेयर
यी दिनहरूको बखत, बर्षको सब भन्दा महत्त्वपूर्ण मेकर न्यूयोर्कमा सम्पन्न भयो। एक मेला जहाँ सबै भन्दा लोकप्रिय र नामी ज्ञात प्रोजेक्टहरूले तिनीहरूको प्रोजेक्टहरू र तिनीहरूका नयाँ उपकरणहरू प्रस्तुत गरेका छन्। अर्डिनो यस मेलामा पनि आएका छन् र अरुडिनो परिवारका दुई नयाँ बोर्ड प्रस्तुत गरेका छन्।
यी प्लेटहरू यस रूपमा चिनिन्छन् अर्डिनो एमकेआर वान १1300०० र अर्डिनो एमकेआर जीएसएम १1400००। दुई साना बोर्डहरू जुन आईओटी विश्वमा केन्द्रित छन् र त्यसले निश्चित रूपमा स्मार्ट प्रोजेक्टहरू बनाउन वा कमसेकम थोरैको इन्टरनेटमा भाग लिन मद्दत गर्दछ।
MKR WAN १1300०० बोर्डको एक बोर्ड लेआउटमा वायरलेस संचार संलग्न छ MKR शून्य बोर्ड, त्यो हो, हामीसँग -२-बिट अनुप्रयोगहरूको लागि समर्थन हुनेछ। प्लेट सुविधाहरू २ flash256 केबी फ्ल्यास मेमोरी र K२ केबी एसआरएएम। यो को शक्ति मा चलाउन सक्छ दुई 1,5V ब्याट्री र सबै .67,64 25..XNUMX x २mmmm को आकारमा। ताररहित संचार गरेर, तपाईंले जडान गर्नुभएको उपकरणसँग इन्टरनेटमा सञ्चारको विकल्प हुनेछ।
Arduino MKR GSM 1400 बोर्ड एक विकल्प हो जुन धेरै IoT परियोजनाहरूको मार्ग अनुसरण गर्दछ। यो प्लेट, यसको एक्रोनिम इंगित गर्दछ, एक GSM मोड्युल समावेश गर्दछ जुन राउटरको आवश्यकता बिना रिमोट जडानलाई अनुमति दिन्छकेवल मोबाइल फोन सिम कार्डको साथ। बोर्डको बाँकी कम्पोनेन्ट्सको डिजाईन MKR शून्य बोर्ड जस्तै छ, तर उर्जा खपत एमकेआर वान १ 1300०० बोर्डमा जस्तो छैन, बढी छ। थाल MKR GSM 1400 लाई कम्तिमा एक 3.7..XNUMXV LiPo ब्याट्री चाहिन्छ क्रमशः कार्य गर्नको लागि। यो ऊर्जा बृद्धि बोर्डको GSM मोड्युलको कारण हो, तर यसको MKR WAN १1300०० बोर्ड जत्तिकै साइज भएको आकारको बृद्धि भएको होइन।
अर्डिनो बोर्डका यी दुई नयाँ मोडलहरू आधिकारिक अरडिनो वेबसाइट मार्फत खरीद गर्नका लागि आरक्षित गर्न सकिन्छ। MKR WAN १1300०० बोर्डको लागतe35 यूरो छ जबकि MKR GSM १1400०० बोर्डको लागत।। .59,90eयुरो छ। दुई व्यावहारिक मूल्यहरू यदि हामी प्लेटहरू र यस समुदायको विशाल समुदायको गुणस्तर लिन्छौं भने। त्यसो भए यस्तो देखिन्छ कि अर्डिनोले अझै आईओटीको लागि स्वतन्त्र वातावरण निर्माणको लागि स fighting्घर्ष गरिरहेको छ। यद्यपि के यी बोर्डहरूको समान सफलता अर्डिनो युनको रूपमा हुनेछ? तिम्रो के बिचार छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: नि: शुल्क हार्डवेयर » Arduino » आर्डूनो एमकेआर वान १1300०० र अर्डिनो एमकेआर जीएसएम १1400००, अर्डिनो परियोजनाबाट आईओटीका लागि नयाँ बोर्डहरू